Fiofanana mpampianatra mediana Rishikesh india | Fanofanana mpampianatra mpampianatra India
200 ny fampianarana fampiofanana mpampianatra mandritra ny ora iray
Fiofanana mpampianatra mandritra ny 500 ora India (Advanced)
100 ny fampianarana fampiofanana mpampianatra mandritra ny ora iray
Fampiofanana momba ny fiofanana amin'ny mpampianatra mandritra ny ora iray
Fisintonana fisaintsainana ny fiainana
Fialam-boly misintona fanahy
200 Hour Hatha Yoga mpampianatra fampiofanana
200 ny fampianarana fampiofanana mpampianatra mpampianatra an'ny Hôrmôna iray Hour
200 ny fampianarana fiofanana amin'ny mpampianatra momba ny yoga Transformational XNUMX
200 ora yoga Fanofanana mpampianatra Rishikesh
100 ny fampianarana fampiofanana mpampianatra mpampianatra an'ny Hôrmôna iray Hour
Transformational 100 ora fampianarana fampiofanana mpampianatra mpampianatra yoga
300 ny fampiofanana mpampianatra mpampianatra an'ny Ora
Fialam-boly yoga fialam-boly
Krismasy yoga sy fisintonana fisintonana
Yoga Fanofanana ho an'ny mpampianatra Nidra Rishikesh India
150 fampiofanana fampiofanana mpampianatra Nidra XNUMX ora
Famerenam-panofanana momba ny fampiofanana mpampianatra
Hevitra momba ny fanofanana momba ny yoga yoga
Hevitra momba ny yoga Nidra
Momba ny ekipa yoga Essence
Momba ny yoga essence Rishikesh
Fototry ny Yoga
Ny hanitry ny fifohazana
Ovao ny fo-mihetsiketsika sy ny saina
Mitondrà dikany, tanjona ary fiadanana ao amin'ny fiainanao
Mahatsapa tena fototry ny yoga, fisaintsainana ary yoga Nidra
Tongasoa eto amin'ny yoga Essence Rishikesh ao am-pototry ny Himalaya mba hiaina ny tena fototry ny yoga, ny fisaintsainana, ny yoga Nidra ary ny Fiovan'ny fiainana amin'ny alàlan'ny fiofanana ho an'ny mpampianatra manamarina iraisam-pirenena toy izao:
100 fiofanana mpampianatra India
200 fiofanana momba ny fanatanjahantena Rishikesh India
Fanofanana momba ny fanabeazana mpampianatra 200 hour India (Level-1,2,3)
200 Hour Hatha Yoga mpampianatra fanofanana Rishikesh India
200 ny fanofanana mpampianatra mpampianatra momba ny tokana Rishikesh India
200 ny fanofanana mpampianatra mpampianatra momba ny fiovan'ny mpampianatra India
300 ny fampiofanana mpampianatra mpampianatra an'i Rishikesh India (Advanced)
Ny fianarana amin'ny lafiny fanandramana sy fiainana
Mankafy ny fifaliana amin'ny fiainana Holistic
Dokotera fampiofanana mpampianatra Rishikesh India
Fantaro ny fomba handanjalanjana ny vatana-saina-fo, ny fomba hitrandrahana ny haben'ny fiainana miafina, Mianara ny fahaizana mampianatra Fandresena amin'ny alàlan'ny fizarana fampianarana fanazaran-tena ho an'ny mpampianatra antsika.
IEZAHO ATAO IZAO
Yoga Lalam-panofanana mpampianatra Rishikesh India
Mianara toetra marina momba ny yoga sy ny fanovana fiainana, zary traikefa ny fifaliana amin'ny fiainana holaniana, ianaro ny fahaizana mampianatra yoga amin'ny fidirana amin'ny Lalam-panofanana ho an'ny mpampianatra yoga.
Yoga Nidra mpampianatra làlam-panofanana Rishikesh India
Mianara fanasitranana lalina sy famelomana aina, Mianara fomba miandàlana hampianarana yoga nidra, Mahalala ny fomba handanjalanjana ny Fahatsiarovana-vatana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fampianarana yoga Nidra mpampianatra.
Avelao ny yoga sy ny fisaintsainantsika
Hanova ny fiainanao ny lalam-piofanana
Yoga Essence Rishikesh dia fikambanana tsy mitady tombontsoa ary manana sekoly yoga an'ny yoga Yoga (RYS), ary ny fanomezana ny Alliance Alliance momba ny fanabeazana (YACEP). Natokana izahay mba hanaparitahana ny fahalalana sy ny siansa yoga, fisaintsainana amin'ny endriny madio eo am-pamitana ny fifaliana, fandriampahalemana, firindrana, ary fitoviana. Izahay dia manome tombony ho an'ny holistic, sy fanandramana ary fiovan'ny toetran-jaza isan-karazany amin'ny alàlan'ireo karazana fampianarana fampiofanana mpampianatra.
Ny fitadidiana ny hasarobidintsika fototra amin'ny fanaterana ny traikefa azo antoka ho an'izay manatevin-daharana anay, dia manolotra fampianarana manampahaizana maro izahay mba hahasoa ny filan'ny tsirairay;
100 ora Fanofanana mpampianatra mpampianatra
200 ora Fanofanana mpampianatra mpampianatra
500 ora fiofanana momba ny mpampianatra (Advanced)
200 ora yoga Fanofanana mpampianatra Nidra (Level I, II, III).
Fanofanana 200 mpampianatra Hatha Yoga
200 ora Fanofanana mpampianatra mpampianatra Holistic
200 ora Fanofanana mpampianatra mpampianatra Transformational.
Ny lalam-piofanana ataontsika dia mampiditra tsara ny fomba fijery sy ny fanaon'ireo tompo taloha sy ankehitriny ankehitriny hamahana ny saina, ny fomba fiainana, ny olan'ny lehilahy maoderina ary mandrisika ireo mpianatra hanorina marim-pototra ho an'ny fandriampahalemana anatiny, fanekena, fahatsapana ny tena.
Ny fampianaranay dia ampitaina amin'ny fomba somary milamina sy mifaly noho izany ny fizotry ny fianarana sy ny fanovana rehetra dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny famolavolana fototra sy mafy orina mba hahazoana ny traikefa azo ampiharina amin'ireo vondron'olona valo amin'ny yoga, araka ny nasongadin'i Rishi Patanjali. Ny fomba fanaonay rehetra dia ampianarina amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fotokevitra fototra amin'ny siansa sika taloha sy ny siansa fanasitranana maoderina hamitaana azy ho feno, sy lamin'asa ary mifanaraka amin'ny fiainantsika maoderina.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny filozofia fototra momba ny fanaovana yoga, azafady mba jereo ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginay momba ny zavatra inoantsika ho izy essentiel de yoga yoga.
Ny angovo manontolo momba ny yoga essence, Rishikesh dia manokana amin'ny fanomezana traikefa tsara amin'ny elanelany rehetra mba hanomezana yoga ho fomba fiaina. Ny fampianaranay, trano fonenantsika, sakafo, yoga ary fisaintsainam-panahy tsara dia nofokarina hanatanteraka ny foto-kevitr'izy ireo lehibe amin'ny fanomezana ny mpianatra ny lafiny fanandramana sy ny fizotran'ny fiainana.
Izahay dia fofona am-po ary mino ny hanome ny ashram manafintohina toy ny tontolo iainana mamela ny mpianatra handinika lalina ny vatany sy ny sainy ary ny fanahiny. Ny ekipa fianakaviana toy ny fianakaviana dia vonona hatrany hanampy sy hanohana ny fitomboan'ny manodidina anao ary hahatsiaro anao any an-trano mandritra ny fotoana ijanonanao.
Ny yoga essence Rishikesh dia manome trano hipetrahana milamina sy madio sy malefaka ahafahanao mijanona mandritra ny fotoana fiofanana. Tao amin'ny toerana niainan'i Lakshman Jhula, sekoly tsy milamina ary tsy misy afa-tsy 200 metatra miala ny renirano Ganga. Izy io dia voahodidina tendrombohitra Himalayan mangina ary zava-maitso mahafinaritra manodidina. Ireo fomba fijery mahafinaritra any an-tendrombohitra sy ny fikorianan'ny rivotra mangatsiaka mamelombelona izay avy any amin'ny sisin'ny Ganges dia manampy ireo mpandray anjara amin'ny fialan-tsasatra voajanahary sy ny fahatsiarovan-tena.
Ny efitranonay rehetra misy efitrano maoderina toy ny efitrano fidiovana sy ny hatsiaka ary ny hatsiaka, ny rivotra sy ny rivotra, ny efitrano fandraisam-bahiny, ny efitrano Wi-Fi, ny rano fisotro, sns.
Samyak Aahaar- ny sakafo mety sy mandanjalanja dia singa iray mampiavaka ny fanao amin'ny ozika. Noho izany, dia manolotra karazan-tsakafo matsiro sy mahavelona ary fihinana vaovao isika mba hanatsarana ny traikefany. Ny entana ara-tsakafo marobe dia sakafon'ny nentim-paharazana malaza indrindra avy amin'ny faritra samihafa any India. Ny sakafo dia atao am-panajana tsotra miaraka amin'ny fitiavana lehibe avy amin'ireo mpahandro za-draharaha avy any amin'ny faritra Himalayan.
Ny akora rehetra, toy ny legioma, voankazo, ary fitaovana hafa, dia amboarina haingana isaky ny sakafo sy eo an-toerana ho an'ny soatoavina mahasalama. Ny sakafontsika dia mitazona fitambaran-tsarimihetsika tokana miavaka amin'ny fomba fanao amin'ny satiora, ny vidin'ny fahasalamana sy ny fanasitranana ny Ayurveda sy ny sakafo voajanahary, ary ny lanjan'ny sakafo voalanjalanja maoderina.
Teny avy ao am-pon'ireo mpianatsika
Hamafiso ny sainao, ny vatanao ary ny fanahinao
Horonan-tsary momba ny Yoga TTC & Yoga Nidra TTC
Horonan-tsary momba ny TTC
Nahoana no Ianaro ny fanofanana momba ny mpampianatra yoga na meditation any India
Mahaiza mandanjalanja ny sainao, ny vatanao ary ny fanahinao
INDE mifofofofo amin'ny sehatry ny angovo Yogic. Efa ho XNUMX XNUMX taona izay no nitadiavan'ny mpikaroka ny fipoiran'ny saina farany. Mazava ho azy fa namorona sehatry angovo lehibe eo amin'ny firenena. Mbola velona ihany ny fofonainy. mila fahatsiarovan-tena sasany ianao, fahaiza-manao manokana ahafahana tsy mahita ny tsy hita manodidina an'io tany hafahafa io. Rehefa manao ny fanofanana ho an'ny mpampianatra mpampianatra momba ny yoga sy ny fialan-tsasatra mpampianatra mpampianatra ianao, dia avelanao ny tena India, ilay tany mandehandeha ao anatiny no hifandray mivantana aminao. Manerana ny toerana rehetra izany, mila mahay mandinika! Mahatsiaro tena! Alert!
RISHIKESH dia fidirana mankamin'ny Himalaya lalina — vavahady ho an'ireo mitady hidina lalindalina kokoa amin'ny diany anatiny. Fantatra amin'ny anarana hoe "Tapo-Bhumi" izany hoe ny fampiharana yoga sy ny fisaintsainan'ny olona maro sy olo-masina hatrizay. Sages sy olona an'arivony no nitsidika an'i Rishikesh hisaintsaina mba hitadiavana fahalalana ambony kokoa sy fahatsapan-tena. Ny sehatry ny angovo sy ny hery ara-panahy amin'ny tany dia manamora ny diantsika anatiny. Mianara bebe kokoa momba ny dianay anatiny sy ny fanovana fampianarana toy ny fampiofanana ho an'ny mpampianatra yoga 200 ora sy ny programa fanofanana mpampianatra 200 fisaintsainana.
INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA
Ao amin'ny yoga Essence Rishikesh dia manome tombam-bidy manokana momba ny toetran'ny fanandramana sy ny fiainana toetran'ny yoga, yoga nidra ary fisaintsainana. Raha tokony hifantoka fotsiny amin'ny lafiny fampahalalam-baovao sy ara-teknika amin'ireo fomba ampianarintsika isika dia mikendry ny hanampy ny mpianatra hamorona fomba fijery vaovao amin'ny fiainana milamina, mifaly ary mirindra tsara mba hahafahan'izy ireo mampita izany amin'ny hafa.
Ny sekoly ao aminay dia fonenan'ireo tia yoga avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izay niantso ny fandaharan'asanay ho "fiovana ara-panahy sy fiainana miaina". Izany dia satria izahay dia mitandrina be dia be ny hanomezana toerana azo antoka sy ahazoana aina ary fandraisana olona ho an'ny mpianatra mba hiasa lalina ao anatin'ny haben'ny vatany-Fofonaina-Fitiavana ho fanitarana ny fahatsiarovan-tena.
Ny sekoly yoga anay dia manana fahaiza-manao lehibe momba ny fomba fitsaboana avo kokoa toy ny yoga nidra, fisaintsainana, chakra, kundalini ary vatana malemy. Ankoatra ny fandaharam-pianarana fampiofanana ho an'ny yoga ananay, dia atolotray ny fampiofanana fampiofanana ho an'ny yoga nidra, ny taranja fampiofanana ho an'ny mpampianatra yoga nidra (ambaratonga 1, ambaratonga 2, ambaratonga 3), ny lalam-piofanana momba ny fampianarana (100, 200, 500 ora), sy ny maro hafa.
Ny fampiofanana mpampianatra mpampianatra 200 Hour ary ny fampianarana 200 Hour Meditation Training Training dia mitana ny lanjany manokana noho ny lalam-piofanana yoga ho an'ny mpampianatra hafa satria manolotra 50 ora fanampiny fampiofanana mpampianatra yoga Nidra (miaraka amin'ny fanamarinana) izay ahafahan'ny mpianatsika manampy ny olona amin'ny fomba fitsaboana avo kokoa.
Lalam-panovana sy fiainana fanandramana amin'ny fomba fampianarana fampianarana siantifika.
Sekoly any India ihany no manome lesona fampiofanana momba ny fampiofanana yoga Nidra
Ireo teknika sy fomba fanao dia mandrakotra ireo fomba amam-panao sy alika samihafa
Ekipa essence yoga
Miorina amin'ny saina, vatana sy fanahy
Tarika Meditation sy Mpampianatra Yoga Nidra
FAMPANDROSOANA ARAKA NY FAMPANDROSOANA VOLA TSY MISY AZONAO
Amin'ny maha mpampianatra mpampianatra yoga ahy, nisafidy ny hanaraka ny fampiofanana mpampianatra mpampianatra nandritra ny 200 ora tao amin'ny Yoga Essence Rishikesh aho satria te hianatra sy hiaina teknika fisaintsainana samihafa izay manolotra fiofanana samihafa noho ny sekoly hafa. Tsy vitan'ny hoe niaina aho ary nianatra fomba fanao misaintsaina hafa isan-karazany fa nanjary lasa fanovana ny fiainako ihany koa. Nahita fifaliana sy tony tao anatiko aho; nanalalina ny diako anatiny mba hahalalako hoe iza aho? Ny vondrona kely misy amin'ilay fandaharana dia nahafahanay nifandray akaiky tamin'ny mpiara-mianatra ary nahafahan'ny mpampianatra tena tsara nitari-dalana. Ny mpampianatra no miaina izay ampianariny ary azoko kokoa izao ny dikan'ny hoe zogi. Ankehitriny fantatro ny fomba tiako hampianarana yoga ny tanindrazako amin'ny fifaliana sy mihira ary dihy. Tena manoro hevitra ity fampianarana ity sy ity sekoly ity aho. Misaotra anao aho fa nanaraka izany. Namaste! Mario.
TSY VOAFAHALAZA, NANOTOKO ARIKA IZAY NANAIKY HANAIKY AZoko
Ny zavatra niainako tany @ yoga Essence Rishikesh tamin'ny fidirako tamin'ny 200 ora fampianarana momba ny fanazaran-tena momba ny mpampianatra Yoga tsy azo lazaina amin'ny teny. Tena traikefa nahafinaritra momba ny fiainana, saina, vatana ary fanahy izany. Momba ny fomba hidirany lalindalina kokoa sy ny fomba hidiranao lalindalina kokoa, sy ny fomba hamela. Tokony ho tsapanao izany, hanehoana azy, maneho izany, mandihy, mitomany, mihomehy, mitsikiaka, mitsambikina, hahatakatra ny ezak'i Swami Samarth miaraka amin'ny làlany. Tsara vintana fa izaho dia iray amin'ireo mpianany satria raha te ho mpampianatra yoga ianao dia mila manampy ny tenanao aloha, mba hanampiana ny hafa. Ahoana no hahitanao ny hafa, raha tsy miaro ny tenanao ianao? Nahita ny tenako aho, nanova ny tenako ary nianatra fa tena tia ny tenako sy ny hafa tsy misy fepetra. Isaky ny fisaorako anao dia azoko atao amin'ny Yoga Essence. Fantatro fa vao nanomboka ny diako tamin'ny yoga ity, fa io fanombohana io dia momba ahy, ary nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fahafantarana izay ao anatiko sy ny fomba hidirako amin'ny yoga sy ny fisaintsainana. Misaotra an'i Namaste!
TRANSCEND, FIKOROHANA MANOMPOANA SY FAMPivoarana lehibe
Yoga Capital of India, Rishikesh Azoko atao ny miaina yoga tena amin'ny alalàn'ny fisoratana anarana amin'ny 200 ora Lalam-piofanana ho an'ny mpampianatra yoga sy yoga Essence, Rishikesh eo ambany fitarihan'i Swami Samarth. Ny ekipa mahafaly sy mpanohana an'i Joy, Anoop, Dhiraj, Ranjan, Prasad dia afaka nanao fampiofanana yoga ho an'ny 200 ora ary nitovy tamin'ny fidiran'ny Ganga masina be voninahitra antsika. Mahatsapa ho tombontsoa manokana aho satria tsy ny zavatra nantenain'ny fiainako ihany ny fampianarana. Ao ambadiky ny fandaharam-potoana henjana tsy misy isan-kerinandro dia ny fikasana hihazona ny angovo tarika mba hahatratrarana ny fiovan'ny fanavaozana isaky ny ambaratonga tsirairay ary tsapako fa io no teny filamatry ny sekoly. Rehefa tapitra ny fotoam-pianarana niaraka tamin'ny fanamarinana, dia afaka manana ny 'traikefa transcend' amin'ny fitomboana anaty isika amin'ny alàlan'ny fanao misaintsaina isan-karazany rehefa maka ny fanomezana tena. Raha ny fahitako azy "Aorian'ny traikefa voalohany fotsiny dia afaka mandray mpampianatra ny mpandray anjara" no fototry ny fiofanana amin'ny mpampianatra yoga holistic ao amin'ny yoga Essence Rishikesh. Ny vavaka mafy nataoko ho an'ny fitomboana mahatsara ny fahasalamana dia ireo izay miditra amin'ny fampianarana sy ny sekoly. Nanana trosa tokoa aho amin'ny ekipa iray manontolo noho ny fitiavan'izy ireo sy ny fanohanan'izy ireo mandritra ny fotoana nijanonako manontolo. Pranam, Fitiavana
TRANSFORMATIONAL, FIVORIANA SY FANDANIANA ARAJIANA
Ny fahitako azoko natao nandritra ny nijanonako sy nianatra tao amin'ny yoga Essence dia miova ny fiainana. Rehefa avy nitady eran'izao tontolo izao ho amin'ny sekoly marina / Ashram / akademika amin'ny fampandrosoana ny diako anatiny dia faly be aho fa nahita Yoga Essence. Mahatalanjona, madio tanteraka ary feno angovo tsara ny tontolon'ny sekoly. Ny tena tsara dia ny ekipa sy ny fitantanana ny sekoly, izay vonona hanampy hatrany. Ireo teknika nampianarina tao amin'ny Yoga Essence dia maro andrana ary manova tanteraka. Swami Samarth Tsy maintsy lazaiko fa mpampianatra mahafinaritra ianao ary ny ampahany tsara indrindra dia ny ampianarinao, miaina ianao. Manazava ny zavatra niainanao sy ny fahitanao ary mino tanteraka aho fa hanao asa mahagaga ny Yoga Essence amin'ny ho avy. Tsy maintsy manampy aho fa mahatalanjona ny ekipanao misy ny Fifaliana, Prasad, ary Ranjan ary feno fitiavana, fandriampahalemana ary firindrana daholo ireo lehilahy ireo. Ny fampianarana mandritra ny 200 ora dia nanatanteraka ny fanantenako rehetra ny lalam-panantenako mpampianatra. Ny votoatin'ny fizarana dia manohina ny lafiny maro amin'ny teknika fisaintsainana izay tena mamelombelona ary mahatanteraka ny antenaina mitady.
avy amin'nyRepoblika Tcheky
INDRINDRA INDRINDRA IZAY HAMPIANATRA NY FAHAMARINANA MANAO STEP METHODOLOGY
Ny fampiofanana mpampianatra ho an'ny yoga Nidra dia tena fanamby ho ahy tany am-piandohana noho ny adin-tsaina sy fitebitebena nanakoako mba handeha amin'ny fialan-tsasatra lalina kokoa sy handao. Saingy rehefa nandeha ny andro dia azoko ny fototry ny olako ary nifindra tato anatin'ny fanao, nahafahako namoaka azy ireo noho ny fivoriana yoga Nidra ary ny fomba fisaintsainana mavitrika. Fotoana mahafinaritra niainana, fahalalana ary hahatsapa ny fomba fanaon'ny yoga Nidra araka ny siansa Yogic nentim-paharazana sy ny fomba fijery ara-pitsaboana maoderina avy amin'ny Swami Samarth. Izy io dia fifandanjana tsara eo amin'ny fampiharana pasifika sy mavitrika amin'ny yoga sy ny fisaintsainana. Tena ilaina ny fampianarana ary nanampy tamin'ny fanaovana lalina kokoa ny fampiharana mandritra ny fotoana hianarana ny fahaizana mampianatra azy ireo. Lota feno hatsaram-panahy sy fahalemem-panahy amin'ny fampianarana ataon'ireo mpampianatra meditation sy yoga izay tena nankasitraka tokoa. Ny sakafo sy ny mpiasa dia tena tsara sy sariaka. Tena sakafo matsiro sy mahafinaritra, tena mahafinaritra.
Mamaky fijoroana ho vavolombelona bebe kokoa
Avy amin'ny Blog
Ny fahatakarana vatana, ny saina, ny fo ary ny fanahy
SORATISY FIKAMBANANA NY FIKAMBANANA YOGIC
Enga anie 3, 2020Enga anie 5, 2020yogaessencerishikesh
Febroary 11, 2020Febroary 12, 2020swamidhyansamarth
Febroary 11, 2020Enga anie 5, 2020swamidhyansamarth
Syllabus of Yogany yoga
SYLLABUS FAHA-200 TANANA AN-TANANA TEZIKA
Enga anie 28, 2019Enga anie 28, 2019swamidhyansamarth
MISY FANDAHORANA MOMBA NY FANDOLORANA
Enga anie 18, 2019Febroary 11, 2020swamidhyansamarth
VIGYAN BHAIRAV TANTRA: Ny Rakipahalalana momba ny fomba fisaintsainana
Aprily 30, 2019Febroary 11, 2020swamidhyansamarth
Fototry ny Yogafisaintsainanany yoga
Inona no atao hoe Raja Yoga? Fampitahana an'i Raja Yoga sy Hatha Yoga
Aprily 15, 2019Enga anie 5, 2020swamidhyansamarth
Mandefasa anay: [mailaka voaaro]
Antsoy izahay: (+ 91) 7409349919 / (+ 91) 8954559984
Ny valinteny ho an'ny mpianatra Yoga Essence
Kilasy fampiofanana mpampianatra
200 ora Hatha Yoga mpampianatra fampiofanana Rishikesh
200 ora Ristikesh mpampianatra mpampianatra momba an'i Holistic
200 ora Fanofanana mpampianatra mpampianatra Transformational
300 ora Fanofanana mpampianatra mpampianatra Rishikesh India
050 Ora Fanofanana Yoga Nidra mpampianatra India (Level-I)
150 ora ara-panofanana Yoga Nidra mpampianatra India (Level-II & III)
200 ora Fanofanana mpampianatra Rishikesh India
500 ora India Fanofanana mpampianatra India (Advanced)
100 ora Fanofanana mpampianatra Rishikesh India
100 ora fampianarana momba ny mpampianatra holistic yoga mpampianatra
Fihemorana fisaintsainana fisainana
08 Andro fialan-tsasatra yoga Holistic
Mihetsika ny fialam-boly an'ny fanahy
SORATISY FIKAMBANANA NY FIKAMBANANA YOGICEnga anie 3, 2020
KIRTAN YOGA | KIRTAN MEDITATIONFebroary 11, 2020
MANTRA YOGA | MANTRA MEDITATIONFebroary 11, 2020
SYLLABUS FAHA-200 TANANA AN-TANANA TEZIKAEnga anie 28, 2019
MISY FANDAHORANA MOMBA NY FANDOLORANAEnga anie 18, 2019
Inona no atao hoe Yoga? - Filozofa na famaizanaJolay 10, 2018
TOROHEVITRA CHAKRA: Fanazaran-tena fisaintsainana momba ny foiben'ny angovo ara-panahyAprily 14, 2019
Ujjayi Pranayama: Zava-dehibe fofonaina mandresyAprily 7, 2019
Transformational Yoga: Ny lakile lehiben'ny fanovanaNovambra 16, 2018
SORATRAN'ANDRIAMANITRA PRANAYAMADesambra 25, 2018
Yoga essence Rishikesh © 2019 | Zo rehetra voatokana